News 18 Nepal || २०७८ सालमा कस्तो छ तपाईको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
२०७८ सालमा कस्तो छ तपाईको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
यो वर्ष तपाईहरुको ग्रहफल कस्तो छ ? ग्रहको अशुभ फललाई कसरी शुभ बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गर्दैछौँ । यो वार्षिक राशिफल ज्यो. पण्डित वैद्यराज दीपक सुवेदीले तयार पार्नुभएको हो । नयाँ वर्ष २०७८ सालमा वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मीन राशिको भाग्यको ढोका खुल्दैछ भने केही राशिको भाग्य मिश्रित देखिएको छ । अब हेरौँ १२ राशिको वार्षिक राशिफल ।
केही अभाव र संघषका बाबजुत प्रख्याति बढ्ने छ । पारिश्रमिक कार्यमा सफलता मिल्ने छ । वाणिदोषको गोचर योग भएकोले बोली व्यवहारमा भने संयम अप्नाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । गरिएका कारोबार उल्टिन सक्ने भय पनि देखिएकोले काम भयो भनेर ढुक्क नहुनु राम्रो हुनेछ ।
आफूले सक्ने सम्मको ग्रह उपचार जन्य उपाय अपनाउनाले नोकरीमा पदोन्नति प्राप्त गर्न सकिने छ । नोकरीको पर्खाईमा रहेकाले जागिर पाउन सकिने छ । कर्मयोगीहरुलाई आकस्मिक लाभ मिल्ने छ । राजनीति समाजसेवा आदिमा पनि आंशिक सफलता मिल्ने देखिन्छ ।
अप्रत्यासित रुपमा व्यवसायिक लाभ एवं केही उपलब्धि मिल्ने छ । समय एवं अवसरको सदुपोग गरी बढी लाभ उठाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । वर्षको पूर्वाधको अन्य समय अल्ली संघर्षकर एवं विपरित प्रतित् भइरहेको छ । मान्यजनलाई कष्ट तथा रोग शोक आदिको भय छ ।
यात्रा, व्यापार, व्यवसाय आदिमा प्रगति तथा सफलता मिल्नेछ । कर्मयोगमा अल्लि बढी जोड गरेर केही अपेक्षित काम कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने छ । नयाँ उद्यमको दिशामा पनि केही उपलब्धि हात लाग्ने छ । साविक भन्दा बढी तयारी पूरा गरेको खण्डमा रोजगारी पाउन सकिने छ ।
काम कार्य संपादन तथा जन व्यवहारमा सजग हुनु उचित हुनेछ । कैफियत कर्मतर्फ पनि चेष्टा बढ्न सक्ने र पछि पछुतो हुने छ । गुरुजनको आर्शिवाद लिएर अघि बढेको खण्डमा बढी जोड गरिएको काममा केही अवरोधका बाबजुत केही सफलता पनि प्राप्त गर्न सकिने छ ।
घर–परिवारमा समझदारी बढ्ने छ । सन्ताना भिलाषीलाई केही कष्टको बाबजुत सन्तान प्राप्ति हुनेछ । केही द्वन्दको बाबजुत छोराछोरीको तर्फबाट सुख एवं सन्तोष मिल्ने छ । जागिरेलाई जागिरमा पदोन्नति हुनेछ । वैदेशिक यात्राका अभिलाषीहरुलाई समय अनुकूलप्रद रहेको छ ।
केही पक्षमा संघर्ष एवं उथलपुथलप्रद पनि देखिएको छ । बढी आशा अपेक्षा एवं चाहना र आसक्ति गरेको काममा बढी सास्ती मिल्नेछ । पारिवारिक, छरछिमेक, समाज, सहकर्मी आदि पक्षमा ग्रहले विपरित प्रभाव गर्न खोजिरहेको हुनाले सहयोगको अपेक्षा नगर्नु सुखकर हुनेछ ।
गोचर–ग्रह परिषद्मा केही ग्रहसदस्यहरु विपरित रहेकाले संघर्ष गरेर आंशिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने छ । प्रतिकूल ग्रहहरुको उपचारका उपाय गर्नाले उद्यम व्यवसायमा केही उन्नति गर्न सकिने छ । व्यापार व्यवसाय तथा कृषि एवं पशुपालनबाट केही लाभ उठाउन सकिने छ ।
सञ्चित धनको खर्च, साविकभन्दा बढी फजुल यात्रा, झुटो लाञ्छना, रोगशोकको सामनाका बाबजुत सामान्यतया पद प्रतिष्ठा बढ्ने, अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्ने र व्यवसायमा प्रगति हुन गई आर्थिक उन्नति हुनेछ । अध्ययन, अध्यापन एवं लेखन आदिमा सफलता मिल्नेछ ।
चोट पटक, घाउ खटिरा एवं पित्तविकार तथा ज्वरो प्रकोपको भय छ । काम कार्यहरुमा अड्चन र ढिलासुस्तिको अनुभव हुनेछ । कैफियत कार्यमा पश्चाताप हुन जाने भय छ । अपेक्षित कार्यमा अबरोध भएपनि अनपेक्षित रूपमा आकस्मिक लाभ एवं उपलब्धिहरु मिल्ने छन् ।
वर्षको शुरुमा आयको तुलनामा व्यय तथा क्षति बढाउने देखिएको छ । गोचरग्रहको परिषद्को अवस्था त्यति सकारात्मक नदेखिएको हुनाले विशेष सजगतापूर्वक जन व्यवहार गर्नु उचित हुनेछ । शत्रु बढ्ने योग परेको हुनाले कार्यक्षेत्रमा सावधानी अप्नाएर अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
रोजगारको अभिलाषीलाई जागिर मिल्ने छ । जागिरेलाई पदोन्नतिका लागि समय अनुकूल परेको छ । व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दामा स्तर वृद्धि हुनेछ । सामान्य कष्टका बाबजुत सन्तान अभिलाषीलाई सन्तान प्राप्ति हुने तथा सुख एवं सन्तोष मिल्ने समय छ । ज्यो पं. दीपक सुवेदी ज्योतिषसम्बन्धी परामर्शका लागि (सम्पर्क : ९८५११३१७४७, ९८४१२२३१२६)